Teriyaki Sauce - ချက်ပြုတ်နည်းများ
အိုးကြက်သား tortilla ဟင်းချို rotel crock
မြေသားအမဲသားနှင့်လွယ်ကူသော taco သို့ကျဆင်းလာစာရွက်
အိမ်လုပ် Teriyaki Sauce ငါတို့သွား - ဆော့စ်ချက်ပြုတ်နည်းများတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့လုပ်ဖို့ကအသုံးပြုခြင်းကိုချစ် teriyaki ဝက်သား , teriyaki ကြက်သား , teriyaki ဆော်လမွန် သို့မဟုတ်ပင်အပေါ် ကြက်တောင်ပံများ !
ည gumbo Bourbon လမ်းကြက်သားစာရွက်
Teriyaki ငံပြာရည်ကိုစတိုးဆိုင်တွင်အလွယ်တကူ ၀ ယ်နိုင်သည်။ သို့သော်အိမ်လုပ်အလွန်ကောင်းသည်။ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ၃ ပတ်လောက်ကြာတဲ့အတွက်ဒါကိုတချို့နဲ့အတူရိုက်ရတာကြိုက်တယ် balsamic vinaigrette အသုပ်နှင့်အချို့သောအဘို့ အီတလီတစ်သင်းလုံးကကစားသမား ။ အရာအားလုံးအခြေခံပါဝင်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုသည်!
Teriyaki Sauce ဆိုတာဘာလဲ
Teriyaki ငံပြာရည်သည်ကြွယ်ဝ။ အထူရှိပြီး umami အရသာနှင့်ပြည့်စုံသောငံပြာရည်ဖြစ်သည်။ Teriyaki ငံပြာရည်ပါဝင်ပစ္စည်းများပါဝင်သည်:
အခြေစိုက်စခန်း: ပဲငံပြာရည်နှင့်ရေ။ ငါများသောအားဖြင့်ရေ၏ထက်ဝက်ကိုထပ်မံအရသာအတွက်လိမ္မော်သီးဖျော်ရည် (သို့မဟုတ်နာနတ်သီးဖျော်ရည်ပင်) အစားထိုးသည်။ ငါမကြာခဏဆိုဒီယမ် teriyaki ငံပြာရည်ကိုသုံးပါနေစဉ်, ငါပုံမှန် teriyaki ငံပြာရည်နှင့်အတူဤစာရွက်ကြိုက်တတ်တဲ့။
ရနံ့ - ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ဂျင်းတို့ဟာဒီငံပြာရည်ကိုအရသာကောင်းစေပါတယ်။ ငါဂျင်းကိုအေးခဲအောင်လုပ်၊ လိုအပ်တဲ့အခါတိုင်းအပိုင်းအစကိုဖျက်ပစ်လိုက်တယ် ဆီပူနှင့်ကြော်သည် ။
နှမ်းမျိုးစေ့များ၊ အစိမ်း (သို့မဟုတ်အဖြူရောင်ဖြူသောကြက်သွန်နီ) နှင့် citrus zest အားလုံးသည်ဤ teriyaki marinade တွင်အလွန်အရသာရှိစေသည်။
Teriyaki Sauce ပြုလုပ်နည်း
သင်အိမ်လုပ် teriyaki ငံပြာရည်လုပ်ပြီးလျှင်သင်ဆိုင်ထဲ၌ထပ်မံ ၀ ယ်ရန်မလိုတော့ပါ။ ငါငံပြာရည်စေရန်ကထူပေမယ့်ငါလုပ်နေလျှင်ငါထူနှောင့်အယှက်မပေးပါဘူး teriyaki marinade ။
ပါဝင်ပစ္စည်းများပေါင်းစပ်: ပြီနောက်ဟင်းထဲမှာပဲပိစပ်၊ ရေ (သို့မဟုတ်လိမ္မော်သီးဖျော်ရည်)၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်းနှင့်အညိုရောင်သကြားတို့ကိုပေါင်းစပ်ပါ။
သင် Teriyaki Sauce ဘယ်လိုထူထဲလာသလဲ ထူထပ်သော Teriyaki ငံပြာရည်သည်ရွေးချယ်စရာမရှိပါ။ သငျသညျတစ် ဦး marinate အဖြစ်အသုံးပြုနေလျှင်, ရိုးရိုးလုံးဝပြုတ်နှင့်အအေး။ ငါငံပြာရည်သို့မဟုတ် baste အဖြစ်အသုံးပြုနေလျှင်ငါအနည်းငယ်ပိုထူစေလို။ ပြောင်းဖူးမှုန့်နှင့်ရေနှင့်အတူ slurry ဖန်တီးနှင့်သင်လိုချင်သောကိုက်ညီမှုရောက်ရှိသည်အထိ whisking နေစဉ်ဆူပွက်နေသော teriyaki ဆော့စ်သို့သွန်းလောင်း။
Teriyaki Sauce နှင့် Soy Sauce အကြားကွာခြားချက်ကဘာလဲ
ကောင်းပြီ, နှစ် ဦး စလုံးကွဲပြားခြားနားသောအရသာရှိသည်။ ပဲငံပြာရည်သည် teriyaki ငံပြာရည်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော်လည်းဆားငန်ခြင်းကိုအညိုရောင်သကြားနှင့်ဂျင်းကဲ့သို့သောအခြားပါဝင်ပစ္စည်းများဖြင့်ခုတ်ဖြတ်သည်။
Teriyaki သည်အလွန်ထူထပ်သောကြောင့်ပဲငံပြာရည်သည်ဟင်းလျာများထက်ရေငတ်စေသောအပြင်ပါဝင်သည် ထမင်းကြော် ။
Toyyaki Sauce ကို Soy Sauce သို့အစားထိုးနိုင်ပါသလား
နှစ် ဦး စလုံးဝက်အူချောင်းသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသောအရသာပရိုဖိုင်းများနှင့်ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုရှိသည်, ဒါကြောင့်ပဲပုပ်ငံပြာရည်တစ် ဦး အစားထိုးအဖြစ်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဤလွယ်ကူသော teriyaki ငံပြာရည်စာရွက်ကိုအိတ်ထဲထည့်ပါ။
အလိုရှိသည်အထူရောက်ရှိသည်အထိ, တစေ့တစောင်းစဉ်နေစဉ် teriyaki ငံပြာရည်ထဲသို့နည်းနည်းသွန်းလောင်း။
သီဟိုCh်ကြက်သားကြက်ဥကြော် - ထွက်ယူတာထက်ပိုကောင်းတယ်
နာနတ်သီး Teriyaki ကြက်သား - လတ်ဆတ်တဲ့အရသာ
ဆန်ချက်ပြုတ်နည်း - ဒီတော့ fluffy!
နာနတ်သီး Teriyaki ပုစွန်သတ္တုပါး packets တွေကို - နွေရာသီမှာအရမ်းကောင်းတယ်
Teriyaki ကြက်သား - အကြိုက်ဆုံး!
ပြင်ဆင်ချိန်၅ မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်၅ မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်၁၀ မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၁ ခွက် စာရေးသူHolly Nilsson ဤသည်လွယ်ကူသောအိမ်လုပ် teriyaki ငံပြာရည်ငါတို့သွား - ငံပြာရည်ချက်ပြုတ်နည်းများတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြက်သားတောင်ပံတွေတောင်မှာ teriyaki ဝက်သား၊ teriyaki ကြက်သားလုပ်ဖို့ငါတို့သုံးရတာကြိုက်တယ်။ ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢⅓ ခွက် ငါမိုးမခပါပဲ
▢၁ ခွက် ရေ သို့မဟုတ်တစ်ဝက်လိမ္မော်ရည်ဖျော်ရည်ကိုသုံးပါ
▢နှစ် လေးညှင်းပွင့် ကြက်သွန်ဖြူ
▢၁ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ဂျင်း minced
▢၃ ဇွန်း သကြားညို
▢နှစ် ဇွန်း ရေအေး
▢နှစ် ဇွန်း ပြောင်းဖူး
ပဲပိစပ်၊ 1 ခွက်အရည်၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်းနှင့်သကြားအညိုလေးကိုသေးငယ်သောကြက်သွန်နီတွင်ပေါင်းထည့်ပါ။
တစ် ဦး slurry ဖန်တီးရန်ရေနှင့်ပြောင်းဖူးဓာတ်ပေါင်းစပ်။ လိုချင်သောကိုက်ညီမှုရောက်ရှိရန်တစ်ကြိမ်အနည်းငယ်ဆူပွက်သောငံပြာရည်ထဲသို့သွန်းလောင်း။
ဒီစာရွက်ဟာဆော့စ် ၁/၃ ခွက်လောက်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အာဟာရဆိုင်ရာအချက်အလက်များသည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းခန့်အပေါ်အခြေခံသည်။
သော့ချက်စာလုံးteriyaki ငံပြာရည် သင်တန်းနှစ် ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုချက်ချင်းကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝတားမြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။